Iimpawu ezintlanu zeefowuni zezona zithengisa kakhulu kwiziphelo eziphezulu | I-Androidsis
Iimpawu ezintlanu zilawula intengiso ephezulu
Intengiso ye-smartphone ephezulu ivele kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ngakumbi nangakumbi abasebenzisi bajonge ukuthenga owona mgangatho uphezulu okanye ezona fowuni zinobuchule kunye nokusika kwintengiso. Ke baya kwicandelo leprimiyamu. Icandelo apho ukhuphiswano lonyukile khona. Nangona kule meko kukho iintlobo ezintlanu ezilawulayo.
Amagama abanye babo akazukumangaliswa, kuba sele bengakudala kweli candelo luluhlu oluphezulu. Le yimeko ye-Apple okanye i-Samsung, ezona zimbini zinde kweli candelo. Kodwa elinye lamagama kwaba bahlanu linokumothusa, yimeko ye-OnePlus.
Ngokukodwa, ezona zintlobo zibalulekileyo zibalulekileyo kolu luhlu luphezulu namhlanje zezi: I-Apple, i-Samsung, iHuawei, i-OPPO kunye ne-OnePlus. Uphawu lwaseMelika luyaqhubeka nokulawula eli candelo, ngokuyinxenye kuba lonke uluhlu lweefowuni lungaphakathi kwalo. Kodwa iphulukene namanye amandla ayo kwintengiso.
I-Apple ithatha isabelo sentengiso esingama-51% kweli candelo. Isamsung kwindawo yesibini nge-22%Ngelixa iHuawei iqhubeka ukuqhubela phambili kwiimodeli zepremiyamu, sele ifumana isabelo sentengiso se-10%. I-OPPO lolunye uphawu oluvela kude, kwaye lishiyeke nge-6% kwaye i-OnePlus sele ivaliwe nge-2%.
Uluhlu olunomdla, kodwa lubonisa ukuba ezi ntengiso ziyazi njani indlela yokuhambisa eli candelo luluhlu oluphezulu. I-Apple kunye ne-Samsung ngamagqala amabini esele enayo. IHuawei luphawu oluneminyaka emibini yenkqubela phambili enkulu, ngentengiso entle kakhulu kweli candelo. Ngelixa i-OPPO kunye ne-OnePlus zikhula kakhulu kwimarike yamanye amazwe, enceda ubukho obukhulu.
Kuya kuba lunomdla ukubona ukuba ezi ntlobo zintlanu ukulawula ukuhlala kule nto iphezulu yeemveliso ezithengisa kakhulu kwisiphelo esiphakamileyo. Kuba ukhuphiswano luyanda. Ke kuya kufuneka benze eyona ikhathalogu yabo ikukuqinisekisa abathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iimpawu ezintlanu zilawula intengiso ephezulu
Intengiso yeHuawei inyusa iipesenti ezingama-50 kwikota yokuqala
UMoto Z4 uvuze ngokupheleleyo: I-Snapdragon 675, isikrini se-OLED, ikhamera ye-selfie ye-25 MP kunye nokunye